Ama-Windchimes Villas Maale Mulshi, 4BR (izivakashi ezingu-8-20) - I-Airbnb
Ama-Windchimes Villas Maale Mulshi, 4BR (izivakashi ezingu-8-20)
Mulshi, Maharashtra, i-India
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Cosmicstays
Le villa eyi-4BHK ingeyodwa kwezimbili ze-Windchimes Villas e-Maale ezinechibi lokubuka elingapheli kanye negumbi legeyimu. Ngegumbi lokuphumula lomthombo wasendlini lidala i-ambience ezolile enendawo eningi kanye nombono we-pool. Wonke amagumbi okulala angu-4 anamagumbi okugeza ayi-en suite, i-TV, ne-AC. Kukhona ithala elincane esitezi esiphezulu se-villa. Ukudla kwasekuseni kuyancomeka, ukudla kunikezwa ngezindleko ezengeziwe. Le villa ilungele imindeni noma iqembu labantu abayi-12-15. Umpheki oqeqeshiwe nezinketho eziningi zokudla ezitholakalayo
*Uma ufuna ukubhukha womabili ama-villas angu-4BHK anechibi langasese le-infinity kanye negumbi legeyimu iyatholakala njengolunye ukufakwa kuhlu okungu-8bhk*
Izakhiwo zinesango futhi zibiyelwe ukuze zinikeze ukuvikeleka okuphezulu, ubumfihlo kanye nendawo yokupaka enendawo yokupaka evikelekile ngaphakathi kwendawo. Lezi zindawo zokuhlala zinezindlu ezizimele ezimbili, ingqikithi yamagumbi okulala angu-4 kanye namagumbi okugeza angu-5 ane-air conditioning, i-TV, i-wifi, kanye ne-backup ye-diesel generator engu-24/7.
Izinga eliphezulu, umbhede ophindwe kabili wegumbi lokulala elikhulu ubheke kuvulandi wawo onezintaba ezinhle kanye nokubukwa kwedamu laseMulshi. Kukhona ithala elincane esitezi esiphezulu se-villa ngayinye.
Indawo ephakathi nendawo yichibi lokushona kwelanga kanye nentaba engapheli. Kuzungeze ichibi indawo yokuzijabulisa enhle, enomthunzi we-pergola efanelekile kanye nendlela yokuhamba exhuma egumbini legeyimu ngemuva kwe-villa. Utshani obukhulu, izihlalo zangaphandle, nendawo eyanele kudala indawo ekahle ye-BBQ yakusihlwa noma ibhulakufesi elifakwe ilanga.
I-Wifi – 14 Mbps